Akkaataa Ergaa Gabaabaa(SMS) Mobile Androoyidii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenyufi akkamitti argii[screen] irraa dhoksina? - OROMO ICT
Akkaataa Ergaa Gabaabaa(SMS) Mobile Androoyidii keenya keessa jiru ittiin dhoksuu dandeenyufi akkamitti argii[screen] irraa dhoksina?
Abdisa Bencha Jara May 14, 2017
Ergaa gabaabaa bilbilsochii(mobile) irraa balleessuun hin barbaachisu, icciitiis taanaan bilbiluma keenyarratti dhoksuun ni danda’ama.
Tajaajila kana akka argannuuf kan nu qarqaaran Fayyadamaan[App] bilisaa heddu kan jiru waan ta’eef, tartiiba armaan gadii hordofuun tajaajilicha argachuu dandeessu.
Iyya’aa(browser) Bilbilsochii Andirooyidii keenya irratti Marsariitii(website) “market.android.com” jedhu bareessaa barbaadi(search) cuqaasaa.
Gara Harka bitaa gubbaarraa hidhaa(link) “GMAIL” cuqaasuudhaan, teessoo ergaa(e-mail ) eenyummeessaa Gmail keessan iddoo barbaachisutti galchuudhaan qabduu Seeni(Sign in Button) jecu cuqaasaa.
. fuulicha(Page) baname sana gara gadii harkisaa(scrolldown) “HIDE TEXT INVISIBLE”, “HIDE MY TEXT/SMS Lite” fi Saanduqa “Private SMS-MMS ” barbaadaa. Fayyadamaan[App} kun tajaajila biroos heddu qaba.
Qabduu Ijaari(INSTALL BUTTON) jedhu tuqaa. Yoo bituu barbaaddan immoo qabduu biti(BUY BUTTON) tuqaa. Lakkoofsa icciitii Kireedit kaardii keessanii galchuun naqattu(download) gootu. yoo hin feene immoo “Free/Trial version” naqattu.
Erga naqattan(downloaded) booda Mirkaneessii(Confirm) cuqaasuun bilbila keessan irratti feetu(install). Sana booda Tole(OK) cuqaasuun tartiiba itti aanu, argiiwwan nuuf dhufan irraa hordofna. Sana booda bilbila keenya irra sajoo(icon) App sanaa barbaadnee kaasfna.
Kana booda qabiyyee Fayyadamichaa(App) sanaa keessaa kan SMS dhoksuuf oolutti dhimma bahuun ergaa akka dhokatu barbaadnu sana dhoksina. FKN: Osoo App “Private SMS-MMS Box” jedhu bilbila keenyarratti naqanneerra ta’ee, Bilbiltuu(dialer) bilbila keenyaa fayyadamuun App kana kaafnee, Jecha darbii(Password=1234) iddoo barreeffamaaf qophaayeefitti galchinee, Tole(OK) cuqaafna. Jecha darbii kana geeddaruuf, Qindaa’ina(settings) seenuudhaan Jecha darbii haaraa(new Password) galchina.
Tarree Maqaa(contact list) ijaaruudhaan Tarree dhuunfaa(Private Contact) keessa naqna. “Message” cuqaasuudhaan Maqaalee barbaadnu filannee lakkoofsa isaanii saanduqa”Add New Entry” itti galchuun qabduu Dabali(Add Button) tuqna. Haala kanaan Ergaan gabaabaan keenya gara kuusdeetaa(private databse) dhuunfaa keessa gala. Kuusdeetaa dhunfaa(private database) kanatti waan feene dabaluu ykn keesssaa baasuuf yoo feene, Ittifufi(continue)cuqaasuun Maqaa biraa filadhu(Select another contact) goonee, “Private Number” cuqaasuun ilaaluu dandeenya.
Haala kanaan tajaajila waan barbaadne bilbila keenya irratti dhoksuu dandeenya.
HORAA BULAA DEEBANAA✍️👈
👥: OROMO ICT TEAM!💤
#Qafoo Haaraa Gabaa irraa bitachuufi Qafoo Biyya alaatii firri namaaf ergu irratti #Ummanni Oromoo #Saamamaa ture, ammas saamamaa jira.
#Of-Eeggannoo – *868*1*2# – Gaaffiifi Sodaa namoota hedduu.
PREVIOUS POST Previous post: Afaan Oromo Computer Terminologies…Jechoota Koompitaraa
NEXT POST Next post: Tajaajila Hiikkaa Facebook Afaan oromoofi Haala itti Fayyadama isaa: OROMO ICT
Maxxansaalee Haaraa: OROMO ICT… Information is Power (9,003)
Total Visit : 782263
Total Hits : 1138864